China Taps N'ihi Multipurpose Manufacturer na Supplier | Dingxing
Taps Maka Multipurpose
Taps Maka igwe anaghị agba nchara
Micro Na Long Olu End Mill
Akwa Ikwusi End Mill
HSS (High Speed ​​Steel) nwere oke ike, na-eyi nguzogide na ikpo ọkụ.Good usoro arụmọrụ, ezigbo ike na ike.High-ọsọ nchara nwere cobalt nwere nnukwu ike .Ọ gaghị efunahụ isi ike mbụ ya na 1000 ℃.
Akwụsị Mill Maka Titanium Alloys
Nhazi nhazi na imewe pụrụ iche, gbochie inye nri, eriri dị nro na ịmịcha mpempe akwụkwọ
Mgbapụ mgbawa ka mma
Na-egbochi mgbawa clogging
Melite eriri eri
Ngwa maka ngwa dị obosara, kpuru ìsì na site na oghere.
Okwesiri maka nhazi nke obere carbon nchara, akwa carbon nchara, alloy steel, copper, aluminum, magnesium alloy na ihe ndi ozo
Mkpuchi CVD (Chemical Vapor Deposition) mkpuchi
-With CVD-Usoro mkpuchi kwesịrị ekwesị maka iyi mgbochi na nnukwu nri na ọkara maka ngwa ngwa ngwa ngwa.
PVD (Nkọwapụta Mkpụrụ Ahụ) mkpuchi
-Nwere mkpuchi PVD-teknụzụ kwesịrị ekwesị maka ngwa ngwa ịbelata obere nri ebe achọrọ nrụgide dị elu.
Ihe onwunwe Carbon ígwè S45C
Ọnwụ oke Inye aka na 20mm, VC 10m / min
Jụọ oyi Mmanụ jụrụ
Mmechi Ngwa agụ owuru nwere ike kwụsie ike, ịrụ ọrụ nke ọma ma na - agba ọsọ ọsọ. Agụ owuru na-agbazi oghere 204. Otu ụlọ ọrụ na - enweta 159 Oghere. Ndụ nhazi nke otu ọnọdụ nhazi karịa ụlọ ọrụ A mụbara karịa 28%.
Ọnwụ oke Inye aka na 25mm, Vc 10m / min
Jụọ oyi Mmiri soluble
Mmechi Agụ owurị ngụkọta Oghere 216. Otu ụlọ ọrụ Nmechi Iri 99 Oghere. Otu ụlọ ọrụ Ọnụ mgbata 159 Oghere. Ndụ nhazi nke otu ọnọdụ nhazi karịa ụlọ ọrụ mụbara karịa 110%, karịa ụlọ ọrụ B mụbara karịa 23% .Speed Leopard ngwaahịa nwere ike ịkwado, rụọ ọrụ nke ọma na nhazi ọsọ ọsọ.
The ngwá ọrụ na ọtụtụ-eji ebu Ndinam, akpaaka ụlọ ọrụ, ifufe ike akụrụngwa, ọgwụ na ahụ ike na ngwa na na on.It na-eji na ịme ọpịpị process.Applicable ka elu arụmọrụ rụpụta nke ígwè, igba ígwè, igwe anaghị agba nchara, Ọla kọpa Alloys, Aluminium Alloys, Titanium Alloys, Heat Resistant Alloys. Tinye na igwe CNC.
Ndị ahịa ọ bụla ga-enwe ọ professionalụ na ọrụ ndị ọrụ Speed ​​Leopard yana ọrụ agbakwunyere bara uru
-Suggestions na ngwaahịa na oke
-Cutting Ọzụzụ Nkà na .zụ
-Nbelata ego na atụmatụ ndozi arụmọrụ
-Onye iwu ọnọdụ nsuso
Nke gara aga: Taps Maka igwe anaghị agba nchara